Amathiphu wokufaka i-Popcorn Time, Spotify neTelegram ku-DEBIAN | Kusuka kuLinux
Sanibonani, malungu athandekayo we Umphakathi Womsebenzisi WeSoftware Wamahhala (Hhayi mahhala) futhi Abasebenzisi be-GNU / Linux Operating Systems. Ngalesi sikhathi ngiza ukuhlanganyela okuncane Amathiphu (Amacebo) engisanda kukufunda ngokuzama wenelise izidingo zakho nezabanye ku-Free Software.
Sizophawula kancane ngohlelo ngalunye futhi sibonise ukuthi ikhodi yeskripthi seBash Shell kufanele ibe yini esivumela ukuthi sikwazi ukufaka ukufakwa kwayo kunoma iyiphi i-PC:
Isikhathi se-Popcorn: Kuyinto isicelo sokuthi dlulisa (khiqiza kabusha) futhi ulande ama-movie, imibukiso ye-tv (uchungechunge) futhi anime (Amahlaya aseJapan) online (nge-inthanethi) kusuka kumafayela izifufula. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, kuyalandwa, kuvulwe uziphu, kwenziwe, kukhethwe i-movie noma isiqephu, kukhethwe ikhwalithi yokukhiqiza kanye nemibhalo engezansi efanelekile, ekugcineni chofoza ku-play futhi ujabulele!
Ku-Linux: wake walanda ifayela le- iphakethe le-GNU / Linux okuhambelana nokwakhiwa okufiswayo (32 Ibhithi = iX86 / 64 Bit = amd64), ifayela elifanayo "Tar.xz" okulandiwe ne- Isikripthi seBash Shell kufanele bahlangane ndawonye ngomzila ofanayo (mhlawumbe "/ Ikhaya / $ USERNAME") bese usebenza ngomyalo womyalo $ bash my_script_popcorntime.sh .
Okuqukethwe kwayo kufanele kube ngaphezulu noma ngaphansi kwalokhu:
Spotify: Kuyinto a ipulatifomu yomculo yomhlaba wonke kwaziwa kahle esetshenziselwa ukukhiqizwa komculo ngokusakazwa, okungukuthi, isevisi yokusakazwa komculo eku-inthanethi ngokusebenzisa umthetho olandelwayo we-P2P. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, landa uhlelo kusuka kuwebhusayithi yayo bese ubhalisa nayo. Finyelela ngegama lomsebenzisi nephasiwedi, hlela futhi ulondoloze konke okudingayo futhi uphathe uhlelo lwakho lomsebenzisi olikhethile. Lapho uhlelo lokusebenza selufakiwe, lapho lisenziwa, umsebenzisi ufaka igama lakhe lomsebenzisi nephasiwedi. Futhi i-voila, kuya ngohlelo oselufinyelele kulo, ungajabulela izinzuzo eziningi noma ezingaphansi.
Ku-Linux: Esikhundleni sokulanda ifayela le- iphakethe le-GNU / Linux okuhambelana nokwakhiwa okufiswayo (32 Ibhithi = iX86 / 64 Bit = amd64), siyifaka kusuka endaweni yokugcina izinto. Ngakho-ke, i- Isikripthi seBash Shell ukwakhiwa kungaba kunoma iyiphi indlela futhi kwenziwe ngomyalo womyalo $ bash my_script_spotify.sh .
Yocingo Ubuso bekhompyutha: Yiklayenti ledeskithophu elisemthethweni leTelegram, okubuye kube isicelo semiyalezo eshesha kakhulu futhi evikelekile, esheshayo, elula futhi yamahhala. Ingafakwa kuwo wonke amadivayisi ngasikhathi sinye ukuvumela ukuvumelanisa kwemilayezo ngokuphelele nganoma iyiphi yazo (izingcingo, amaphilisi noma amakhompyutha). Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, kuyalandwa, kuvulwe uziphu, kufakwe inombolo yocingo efakiwe, ikhodi itholwa kuyo efakwe kuklayenti efakiwe, futhi nge-voila, ungaxoxa futhi ujabulele!
Ku-Linux: wake walanda ifayela le- iphakethe le-GNU / Linux okuhambelana nokwakhiwa okufiswayo (32 Ibhithi = iX86 / 64 Bit = amd64), ifayela elifanayo "Tar.xz" okulandiwe ne- Isikripthi seBash Shell kufanele bahlangane ndawonye ngomzila ofanayo (mhlawumbe "/ Ikhaya / $ USERNAME") bese usebenza ngomyalo womyalo $ bash my_script_telegram.sh .
Nota: Uma ufuna noma ungakwazi imidwebo (kusuka kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi) vula uziphu bese uyiqhuba ngqo ngaphandle kwesixhumanisi (isinqamuleli) kusuka kumenyu noma kudeskithophu, ungakunaki okuqukethwe yisikripthi. Uma wenza iskripthi khumbula ukuyivikela futhi uyiqhakambise kahle, okungukuthi, yakhela imizila edingekayo ukuze phakathi kwezinye izinto ikwazi ukwenziwa kuphela yimpande ye-superuser, ingenziwa kunoma iyiphi indlela, iqinisekise ukwakheka kwayo nalokho kwephakeji, phakathi kwezinye eziwusizo kakhulu.
Mina ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi kufanele "ukwenza lula nokukhuthaza ukusetshenziswa kwe-Standalone noma i-Online Applications (Webapps / SaaSS) ku-GNU / Linux yanoma yiluphi uhlobo (Free / Open / Free / Private / Closed / Paid), inqobo nje uma sibeka phambili, sithanda futhi sikholwe okwethu Izicelo ezizimele noma eziku-inthanethi (Mahhala / ezivulekile / zamahhala) njengezimbi ezinye izindlela zokusebenzisa ezinye (Okuzimele / Okuvaliwe Kukhokhelwe) ”.
Ngakho-ke ngiyethemba lokhu ukushicilelwa kungukuthi ilusizo kakhulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Amathiphu wokufaka i-Popcorn Time, Spotify neTelegram ku-DEBIAN
Ukunikela ngesoftware yokuphatha kufana nokunikeza izidakamizwa noma ugwayi, kuyenyanyeka.
Ukhuluma ngeSpotify, insizakalo yezohwebo engumthombo ovaliwe. Lapho beyeka ukuzuza kule nsizakalo, lapho ngikhululekile ngizoyisebenzisa, baze basebenzise i-damn Digital Rights Management. Kuyinto SHIT.
Uma ufuna ukukhululeka, ungalaleli umculo we-MP3, ingasaphathwa eye-flash noma amafomethi we-Apple, uzibeka obala ku-malware! Ukufa ngasese, impilo ende ku-Free Software.
Qhathanisa isoftware ephathelene nezidakamizwa? Ngabe ungaboni ngempela?
Sawubona, bengifuna ezinye izindlela engizokubona futhi ukuphela kwento engiyitholile yile:
Sengivele ngiyisebenza ku-GNU / Linux yami futhi ngizothumela ngayo kungekudala njengenye indlela engizoyibona. Kubi kakhulu ukuthi angikwazi ukukudlulisa isikrini sokuphrinta khona manje ukuze usibone sisebenza!
Kepha khumbula, ukuba yi-RMS ngaphandle kokufana naye akuhambisani, ngokokuziphatha, ngokuziphatha nangobungcweti!
Isifundo sibonakala siphelele kakhulu. Ngiyabonga 😀
Ngifuna nje ukulungisa ukuthi i-anime akuyona i-comic yaseJapan. Leyo yi-Manga xD
Magical Madoka kusho
Haha, kwenzeka ngalolo hlaya, i-anime = izithombe! Haha
Ngakolunye uhlangothi, i-tuto enhle, i-telegram yinhle.
Phendula uMadoka Magica
Ngiyabonga ngomnikelo kodwa… uyabona ukuthi akunakwenzeka, kuqondakala futhi kufundisa kangakanani ukudlulisa iskripthi se-bash ukulanda amafayela ahlala eshintsha? Ngaphezulu kwemibhalo akuchazwa neze. Angikuboni ukusetshenziswa kwangempela kwalokhu.
Sawubona, impendulo yakho ibhalwe kwesinye sezindatshana eziyishumi ezedlule ezibhaliwe, sengivele nginqena ukuphinda into efanayo kaninginingi, ofunda kuphela incwadi ngendlela engaxhunywanga futhi hhayi uchungechunge!
Kudala ngangifuna ukufaka i-popcorn kahle!
Izinketho ezinhle kakhulu
Faka amanye amafonti ku-LibreOffice kusuka ku-Terminal usebenzisa i-Shell Scripting
Faka inguqulo yakamuva ye-LibreOffice kusuka ku-Terminal usebenzisa i-Shell Scripting